एकाएक सरकारले गर्यो लकडाउन गर्ने घोषणा कहिले बाट? हेर्नुहोस सूचना – Nep Stok
फागुण २८, २०७८ शनिबार 1750
बेइजिइ । कोभिड सं’क्रमण निरन्तर बढिरहेपछि चीनको उत्तरपूर्वी सहर चाङ्गचुनमा लकडा’उन घोषणा गरिएको छ । हालसालै सांघाइले विद्यालयलाई अनलाइन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनका कारण दुई वर्षमा पहिलो पटक चीनको दैनिक कोभिड सं क्रमण १० हजार नाघेको छ ।
युक्रेनमा नेटो र रुसको प्रत्यक्ष द्वन्द्वको अर्थ तेस्रो विश्वयुु:द्ध पछिल्लो २४ घण्टामा १६ लाखमा कोरोना पुष्टि, ५ हजार सं क्रमितको ज्यान गयो ९० लाख जनसंख्या भएको चाङ्गचुन जिलिन प्रान्तको राजधानीसमेत हो । चाङ्गचुन प्रान्तकै महत्वपूर्ण औधोगिक आधारसमेत हो ।
चाङ्गचुनका वासिन्दालाई घरबाटै काम गर्न आदेश दिइएको छ । नयाँ नियमअनुसार ‘दैनिक अत्यावश्यक वस्तु’ किन्न प्रत्येक दुई दिनमा एक जनालाई मात्र बाहिर निस्कन अनुमति दिइनेछ ।
स्वास्थ्य आयोगका अनुसार कोभिड म हामारी फैलिएसँगै चीनले पहिलो पटक -यापिड एन्टिजेन परीक्षण सुरु गर्दैछ । पछिल्ला दिनमा चीनका विभिन्न सहरमा कोभिड सं क्रमणका घ टनामा बृद्धि भएको छ ।
काठमाडौं । युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार खार्किभमा जारी यु द्धका क्रममा एक जना रुसी ”उच्च सैन्य अधिकारी मा रिएका छन्”।बीबीसीले स्वतन्त्र रूपमा यस विषयको पुष्टि गर्न सकेको छैन। रुसी अधिकारीहरूले पनि उक्त विषयबारे प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्।
Prevओखलढुंगाकी लक्ष्मी सुनुवार : २० वर्षमै बनिन् जहाजको इलेक्ट्रिकल टेक्निसियन (भिडिओ हेर्नुस्)
Nextके अमेरिकी सेना नेपाल आउँन लागेकै हो ?
भारत र पाकिस्तान लगायत यी देशलाई पछि पार्दै नेपाली विद्यार्थीले जिते ३ हजार अमेरिकी डलर
गैडाकोट पुर्याइएका पल शाहले सरकारी वकिल समक्ष दिए यस्तो वयान